Zimbabwe Today Archives - KeepUp 247
Category Archives: Zimbabwe Today
Aug 16, 2018 by Ncekuyenkosi Eddworks Nkomo
MDC Leader Tendai Biti Released On Bail
Zimbabwe’s former finance minister and opposition leader Tendai Biti appeared in court on Thursday to be charged with stoking post-election violence in a case watched around the world as a test of President Emmerson Mnangagwa’s treatment of opponents. Tendai Biti, whose People’s Democratic Party
Aug 10, 2018 by Ncekuyenkosi Eddworks Nkomo
Zanu Pf Leads In Zim Elections
Results show President Emmerson Mnangagwa’s ZANU-PF picking up 109 seats against 41 for the opposition. Zimbabwe’s ruling ZANU-PF party has won the most seats in parliament, official results showed on Wednesday, as the count continued in the presidential race. The Zimbabwe Electoral Commission results showed
Aug 01, 2018 by Ncekuyenkosi Eddworks Nkomo
Tendai Biti Announces MDC Victory
Senior opposition MDC official Tendai Biti has claimed party leader Nelson Chamisa has won Zimbabwe’s presidential election and alleged that the authorities are delaying the publication of results. “The results show beyond reasonable doubt that we have won the election and that the next
Jul 31, 2018 by Ncekuyenkosi Eddworks Nkomo
Zimbabwe The New Beginning As We Hope For A Change
Zimbabwe goes to the polls today in its first election since authoritarian leader Robert Mugabe was ousted last year, with alleged ballot fraud and the likelihood of a disputed result clouding voting day. President Emmerson Mnangagwa, Mugabe’s former ally in the ruling ZANU-PF party, faces
Jul 30, 2018 by Ncekuyenkosi Eddworks Nkomo